प्रेमः तिमीलाई पाइनँ भने अरु कोही पनि चाहिँदैन
तिमी मेरो जीवनमा आउनु एउटा इन्सिडेन्ट थियो अनि जीवनमा तिमी नै जीवन बनेर आउनु मेरो भाग्य ।
प्रेम एकपल्ट मात्र हुन्छ रे । कसले भन्यो प्रेम एकपल्ट मात्र हुन्छ ? कोही सही मान्छे भेटियोस्, कसैले सुखमा दुःखमा हात धोएर साथ देओस् त प्रेम अर्कोपटक नि हुन्छ । आँशु खुसीले भगाइदिने अनि पीडामा मलम लगाईदिने मान्छे भेटियोस् न, प्रेम दोश्रो पटक पनि हुने रहेछ ।
खै कस्तो खालको प्रेम बस्यो तिमीससँग ? कसैले तिम्रो नाम मात्रै लिएको सुन्दा पनि यी ओठहरु अनायासै मुस्काउन थाल्छन् । भगवानले जोड्न नसकेको हाम्रो नामलाई दुनियाँले जोडिदिँदा पनि यो मनमा छुट्टै आनन्द महसुस हुने गर्छ ।
जब दुःखमा हुन्छु तब आँशु पुछ्दै भन्छौ नि, किन रोएको, म छु नि । तब लाग्छ संसारकै भाग्यमानी म छु । जब तिमी थोरै मात्र पनि मसँग दूरी बढाउँछौ, तिमीलाइ बताउन मन लाग्छ, तिमी बिना मेरो अस्तित्व छैन । कसरी पुष्टि गरम ? घामको अनुपस्थतिमा फूल फक्रेको अनि सासको अनुपस्थितिमा मुटु धड्केको थाहा छ र तिमीलाई । तिमी हुँदा केहि नभए पनि सबै चिज भए जस्तो लाग्छ । तिमी नहुँदा सबै चिज भए पनि केही नभए जस्तो लाग्छ । हो, यति प्रेम छ तिमीसँग मलाई ।
तिमीलाई कति प्रेम गर्छु भनेर यो दुनियाँले त अड्कल पनि लगाउन सक्दैन, जति प्रेम गर्छु सबै तिमीलाइ नै गर्छु । तिमीसँग टाढा हुने कुराले यति डर लाग्छ नि, त्यति त सासले शरीरबाट टाढा हुन्छु भन्दा नि लाग्दैन होला । कसैले जिस्काएको, कसैले चिड्याएको अलिकति पनि सहन सक्दैन यो मनले । देखिएका हजारौं पनि रुचाउँदैन यो नयनले । सताए पनि, रुवाए पनि, हँसाए पनि केवल तिमी नै चाहिन्छ यो मनलाई । यो मस्तिष्कले केबल तिम्रो नै साथ खोजिरहन्छ । हजारौं पिडाहरु तिम्रा अङ्गालोमा कसक्क बाँधिदा मात्रै पनि आनन्द महसुस हुन्छ मलाई ।
त्यसैले तिमी सदाबहार प्यारो लागिरहन्छौ मेरो लागि । कहिलेकाँही आफैसँग भलाकुसारी गर्न मन लाग्छ, के भो त ? जिन्दगीले गलत समयमा गलत परीक्षा लिइदेला के भो त ? आफ्नाहरूले हात थाम्नुपर्ने बेलामा धकेलिदेलान् के भो त ?
दुनियाँले कल्पना गर्ने खुशी हाम्रो भागमा नआउला । यी सबै सबैलाई दूर राखेर म उनीसँगको गहिरो प्रेममा बेहद खुशी हुनेछु । बरु मृत्यु नै आओस् मलाई मंजूर छ तर म यति चाहन्छु कि तिमीसँग छुट्टिएर टाढा हुने दिन कहिल्यै नआओस् । एउटा अबिर लागेको ढुंगा देखें पनि तिमीलाई माग्ने गर्छु । थाहा छैन तिमीलाई हाँसिल गर्न सक्छु या सक्दिन तर यति थाहा छ, तिमीलाई पाइनँ भने अरु कोही पनि चाहिँदैन ।
मैले आफूलाई तिमीमा नै अर्पित गरिसकेँ । मेरो जिन्दगी तिम्रो नाममा नै समर्पित गरिसकेँ ।